10G XFP Vagadziri | China 10G XFP Fekitori & Vatengesi
HUANET 'S HUA-XP1596-ZR, L Diki Fomu Chinhu 10Gb / s (XFP) ma transceivers anoenderana neazvino XFP Multi-Source Chibvumirano (MSA) Tsananguro. Iwo echokwadi akawanda-protocol transceiver anoenderana ne100km SONET OC-192 uye SDH STM-64 paITU-T G.959.1, uye zvakare inotsigira 10GBASE-ZR / ZW 80km 10-Gigabit Ethernet, 10-Gigabit Fiber Channel, uye zvese inoenderana ITU-T G.709 FEC (OTN) data rate. Dhijitari diagnostics mabasa anowanikwa kuburikidza ne 2-waya serial interface, sezvakatsanangurwa muXFP MSA.
HUANET HUAXCxx1XL-CDH1 iri Transceiver inoratidza yakanakisa wavelength kugadzikana, mutengo unoshanda module. Yakagadzirirwa 10G CWDM SDH, 10GBASE-ZR / ZW uye 10G Fiber- Chiteshi zvinoshandiswa. Iyo transceiver ine zvikamu zviviri: Chikamu chekutepfenyura chinosanganisira iyo yakatonhora EML laser. Uye chikamu chinogashira chine APD photodiode inosanganiswa neTIA. Ma module ese anogutsa kirasi I laser chengetedzo zvinodiwa. Iyo CWDM XFP transceiver inopa yakagadziriswa yekutarisisa interface, iyo inobvumidza chaiyo-nguva kuwana kune zvishandiso zvinoshandisa paramita senge transceiver tembiricha, laser bias yazvino, inopfuudzwa simba remawoko, rakagashira simba remaoko uye transceiver magetsi emagetsi.
HUANET HUAXDxx1XL-CD80 ndeye DWDM XFP Transceiver inoratidza yakanakisa wavelength kugadzikana, inotsigira kushanda pa100GHz chiteshi, inodhura module. Yakagadzirirwa 10G DWDM SDH, 10GBASE-ZR uye 10G Fiber- Chiteshi zvinoshandiswa. Iyo transceiver ine zvikamu zviviri: Chikamu chekutumira chinosanganisira inotonhorera EML laser. Uye chikamu chinogashira chine APD photodiode inosanganiswa neTIA. Ese ma module anogutsa kirasi I laser chengetedzo inodikanwa Iyo DWDM XFP transceiver inopa inowedzeredzwa yekutarisa interface, iyo inobvumidza chaiyo-nguva yekuwana kune zvishandiso zvinoshanda paramende senge transceiver tembiricha, laser bias yazvino, inopfuudzwa simba re optical, rakagashira simba remaoko uye transceiver magetsi emagetsi.
Optical Fiber Module, External Modulation Transmitter, Sfp C ++, Huawei Olt Mutengo, Xfp Transceiver, Huawei Qsfp +,